မော်လ်တာမြေထဲပင်လယ်တခုတခုအပေါ်မှာကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတရားဝင် "မော်လ်တာသမ္မတနိုင်ငံ" အဖြစ်လူသိများသည်။ ကတူနီးရှားကနေ 50 မိုင် (80 ကီလိုမီတာ) ဖြစ်သကဲ့သို့အီတလီနိုင်ငံ 175 မိုင်၏ "Boot တက်" အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစစ္စလီကျွန်းမှ၎င်း၏အနီးကပ်နီးကပ် (280 ကီလိုမီတာ) ကမြောက်ပိုင်းအာဖရိကနှင့်အတူအဓိကဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့စံပြ access ကိုမှန်ကန်စေသည်။
မော်လ်တာရဲ့မြေဧရိယာ (122 ကီလိုမီတာ) 316 စတုရန်းမိုင်ဖြစ်ပြီး 450,000 ကလူနေထူထပ်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုပတ်ပတ်လည်၏လူဦးရေရှိတယ်။ Valletta သူ၏မြေဧရိယာအဲဒါကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) တွင်အသေးဆုံးပါလီမန်အဆောက်အအောင်တစ်ဦးတည်းသာထက်ဝက်စတုရန်းမိုင် (0.8 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပါသည်၎င်း၏ပါလီမန်အဆောက်အမြို့ဖြစ်၏။ မောလ်ဟာမိခင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိတစ်ဦး language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မော်လ်တာရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း (1995 ၏ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ) လို့ခေါ်တဲ့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ကုမ္ပဏီဥပဒေ, အပေါ်အခြေခံပြီးဥပဒေများဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းမော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီများ၏ Registry ကိုမှတ်ပုံတင်နေကြတယ်။ မော်လ်တာဥရောပသမဂ္ဂ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကမော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေတှငျတှေ့က၎င်း၏စည်းမျဉ်းအချို့အများကြီးအခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အထွေထွေလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။
• အသင်းဝင်ဖို့နဲ့အီးယူ Proximity: အီတလီနှင့်ဂရိနိုင်ငံမှဒါအနီးကပ်တည်ရှိသောနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းခံနေရအီးယူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုကော်ပိုရေးရှင်းကအဆင်ပြေစေသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးမော်လ်တာကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• ဝင်ငွေခွန်သို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်အဘယ်သူမျှမ: မော်လ်တာကော်ပိုရေးရှင်းသာမော်လ်တာရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချသည့်အခါထုတ်ပေးင်ငွေအပေါ်၎င်းတို့၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝင်ငွေခွန်သူကိုနိုင်ငံပေါင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများကသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• အဘယ်သူမျှမ Dividends အခွန်: ကော်ပိုရေးရှင်းမှန်ကန်စွာဖွဲ့စည်းခဲ့နေတယ်ဆိုရင်သူတို့မော်လ်တာရဲ့ပြင်ပတည်ဆဲခွဲများအနေဖြင့်ဝင်လာသောခွဲဝေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ရကြဘူး နယ်စပ်.
မော်လ်တာကော်ပိုရေးရှင်းထူးခြားတဲ့အမည်ရွေးကြောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. မဆိုတည်ဆဲကော်ပိုရေးရှင်းအမည်များကိုဆင်တူမဖြစ်နိုင်ပါ။ မောလ်တီကော်ပိုရေးရှင်း၏နာမတော်ကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီမော်လ်တာတစ်နေထိုင်သူဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်မော်လ်တာအင်တာနက်ဒိုမိန်းနာမည် (.MT) နေသမျှကာလပတ်လုံးမော်လ်တာကော်ပိုရေးရှင်းထို domain name ကိုသုံးပါရန်၎င်း၏ညာဘက်မိန့်နှင့်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာရန်သဘောတူအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရှိပြီးသားမောလ်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်အရာရှိတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်မရလျှင် .MT domain name ကိုမောလ်တီမူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့နှင့်အတူကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ domain name ကိုမှတျပုံတငျဖို့, မှတ်ပုံတင် applications များထို domain name ကိုလက်ခံရန်အခွင့်အာဏာရှိပါတယ်ရာမော်လ်တာအတွက်ကွန်ယက်သတင်းအချက်အလက်စင်တာကိုနှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
မော်လ်တာကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။ ဖြစ်စဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုစာရွက်စာတမ်းအရာရှိတဦးကသတိပေးချက်များနှင့်အတူတင်သွင်းပါလိမ့်မည်ရှိရာမှတ်ပုံတင်ရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦးအဓိကရုံးရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ.
ပုဂ္ဂလိကကော်ပိုရေးရှင်း 1,165 ယူရိုတစ်နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။
မော်လ်တာသည်၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်မော်လ်တာအတွက်ခွဲများနှင့်အတူနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေအခွန်ခံရပါဘူး။ မော်လ်တာအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချမော်လ်တာကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ဝင်ငွေအခွန်နှုန်းကို 35% ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွဲသွင်းပါဝင်အခကြေးငွေ, မော်လ်တာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဖြစ်မကြာမီကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းသည်အဖြစ်ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်သူတို့ Authorized ဝေမျှမယ် Capital ၏တန်ဖိုးကိုပေါ် မူတည်. EUR 245 ဦးရေအများဆုံးမှ EUR 1,750 ၏နိမ့်ဆုံးကနေခြားနားသည်။ သက်တမ်းတိုးဘို့, နိမ့်ဆုံး, EUR 100 ၏နှစ်စဉ်ကြေးအတူတူတစ်နှစ်ပတ်လည်၏လကျအောကျခံနှင့်အတူပေးဆောင်ဖြစ်ပါသည် ပြန်လာ.
ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ access ကိုကန့်သတ်ရန်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့ကုမ္ပဏီနှင့်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များအတွက်မော်လ်တာအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
မော်လ်တာကော်ပိုရေးရှင်းကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေထဲမှာဖော်ပြထားအဖြစ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်လုပ်ပါ။ သို့သော်စာရင်းကိုင်အလေ့အထများထိန်းသိမ်းထားကြသည်သမျှ, သူတို့ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအသရုပ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်းအကောင့်မှတ်တမ်းများကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေပေါ် မူတည်. ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များမော်လ်တာအတွက်သေးအဖွဲ့အစည်းများ (ကွက်လပ်) အတွက်အထွေထွေစာရင်းကိုင်အခြေခံမူအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်မောလ်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဒါရိုက်တာရှယ်ယာရှင်များမှကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများကိုသရုပ်ပြရမယ်လိုအပ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များအမြတ်အစွန်းနဲ့ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်နှင့် ဆုံးရှုံးမှု.
နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးကိုမော်လ်တာအတွက်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းကော်ပိုရေးရှင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်၎င်း၏စာရင်းစစ်များနှင့်ဒါရိုက်တာများ, နှင့်ရှယ်ယာရှင်များကအတည်ပြုဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများရှိရမည်။
ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်လိုအပ်သောအချိန်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့အမျိုးအစားအဖြစ်, မှန်ကန်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများ၏အချိန်မီတင်ပြပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထိရောက်စွာပြီးစီးခဲ့သည်ဆိုပါကထဲဆွဲသွင်းပါဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့ကုမ္ပဏီအဖြစ်အနည်းငယ်သာ 48 အဖြစ်နာရီကြာနိုင်ပါသည်။
ဥရောပနှင့်၎င်း၏တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်အီးယူအဖွဲ့ဝင်, တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်မရှိ, ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှင့်မော်လ်တာ၏အပြင်ဘက်တွင်ရရှိခဲ့အမြတ်အစွန်းမဝင်ငွေအခွန်နှင့်မျှခွဲဝေအခွန်မှမော်လ်တာရဲ့နီးကပ်နီးကပ်: မော်လ်တာကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစား။